बिहीबार, मंसिर ११, २०७७ लाइभ
बिपिन बुढाथाेकी शनिबार, कात्तिक २२, २०७७
केही दिनअघिको कुरा हो। एक युवाले सामाजिक सञ्जालमा 'रेपिस्ट ग्रुप' बनाउनेसम्मको हर्कत गरे। सामाजिक सञ्जालमै खासगरी महिलालाई बलात्कारको धम्की काफीमात्रामा आउने गर्छ। उसो त प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरे ज्यान मार्नेसम्मको धम्की पनि आएको खबर पर्याप्त सुन्नमा आउँछ।
अपराधपछि सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गर्ने मनसायले बलात्कारपछि हत्या गरिएका थुप्रै घटना छन्। हाम्रो सामाजिक संरचनामा बलात्कारले एउटा महारोगका रूपमा जरो गाडेको छ। सामान्यतयाः घर परिवारबाटै लिङ्गका आधारमा विभेद सुरु हुन्छ। समाजले पनि हुबहु त्यही नक्कल गर्छ। सामाजिक विभेद, असमानता र पृथकीकरणका कारण समाजमा शक्ति सन्तुलन कायम हुँदैन र फलतः शक्तिशाली मान्छेले निर्धोमाथि यौन शोषण गर्छ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई पनि सकेसम्म लुकाउने कोसिस हुँदै आएको यथार्थबीच छौं हामी। यौनजन्य अपराध गाउँघरमै मिलाउने पहल भएका खबर बेलाबखत बाहिरिन्छन्। शक्ति, सम्पर्क, सम्बन्धजस्ता कुराका आधारमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कुचेष्टा गरिन्छ। समाजभित्रै यौनजन्य हिंसा मिलाउन अग्रसर हुने हरेकलाई कारबाही आवश्यक छ।
यससम्बन्धी संख्यात्मकरूपमा ज्यादै न्यून घटनामात्रै प्रहरीमा रिपोर्ट हुने गर्छ। कतिपय प्रसंगमा प्रहरीले समेत मिल्न दबाब दिएको कुरा समाचारमै आएका उदाहरण छन्। योनीभित्र इज्जत देख्ने सामाजिक मनस्थितिका कारण धेरै पीडित हरेक रात न्यायविहीनताको स्थितिमा पिल्सिरहेका छन्। न्याय प्रणालीमाथि भरोसा टुट्नु पनि रिपोर्ट दर्ज नहुनुको अर्को प्रमुख कारण हो। महिनौंसम्म पनि केसको सुनुवाइ नहुँदा अरूलाई थाहा होला भन्ने त्रास अर्को कारण हो। यी सब हुनु पछाडिका कारण थ्रुपै हुन सक्छन्। इज्जतमा दाग लाग्ने गलत मनोविज्ञानको दोष पनि उत्तिकै छ। नेपाली सामाजिक संरचनामा लुकेको विभेदलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन। बेरोजगारी, गरिबीजस्ता कारणलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। राज्य संवेदनशील हुन जरुरी छ। नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउने दायित्वलाई राज्यअधिकारीहरूले बोध गर्नु जरुरी छ।
उसो त यौन शोषणसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा पुगेर पीडितले न्याय पाएका नजिर पनि छन्। मालिकले आफ्नो कर्मचारीलाई यौन शोषण गरेर बच्चा जन्माएको समाचार पनि मूलधारकै मिडियाले छापेको देखेका छौं। शिक्षकले आफ्नै विधार्थीलाई करणी गरेको कुरा सुन्दासुन्दै अभिभावकले कति सुरक्षित महसुस गर्दै आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँछन् होला? साँच्चिकै राजनीतिक संरक्षणले गर्दा दोषीले उन्मुक्तिमात्रै नभएर सावर्जनिक पद धारण गर्दै पीडितलाई मात्रै नभएर सिंगो समाजलाई नै यातना दिरहेका छन्। यहाँ बलात्कारीले नै अधिकारकर्मीको परिचय भजाएर बोक्रे भलाद्मी बनेको समेत उदाहरण छन्। त्यस्तालाई सामाजिक अभियानदेखि अन्य हरेक गतिविधिमा बहिष्कारको परिपाटी सुरु गर्नुपर्छ। यस्ता गलत र अमर्यादित आचरण र व्यवहारका व्यक्तिलाई कुनै पनि सभ्य समाजले सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठान्दछ।
कोभिड-१९ महामारीक बेला संसारभर नै महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक भए। यद्यपि, कुनै पनि कारण देखाएर अपराध गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन। पछिल्लो समय नेपालमा पनि यस्ता हिंसाका घटनामा व्यापक वृद्धि भएको देखिएको छ। रुपन्देहीकी अंगिरा पासी, बझाङकी सम्झना विक, सप्तरीकी संगीता मण्डलले भोगेका यौनजन्य हिंसाबाट उनीहरूको मृत्यु नै हुन पुग्यो। अझ दलित, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकमाथि हुने गरेका दमन र नेपालमा दण्डहीनताले पाएको संरक्षणले यस्ता अपराधिक घटना दिनानुदिन बढिरहेको स्पस्ट हुन्छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटनामा दोषी पहिचान गरी न्याय स्थापित गर्न दुई वर्षयता नागरिकले गरिरहेका सङ्घर्ष निष्प्रभावी हुन पुगेका छन्। न्याय दिने निकाय नै कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ। तर, यता सडकदेखि सदनसम्म भने बलात्कारीलाई फाँसी दिने र नपुंसक बनाउने माग नेपालमा बढिरहेको छ।
तातो सडकमा कालो पहिरनमा रहेका र कालै प्लेकार्डमा 'ह्याङ दि रेपिस्ट' लेखिएको नारा प्रदर्शन गर्दै कति युवा अभियन्ता नेपालगन्ज जिल्ला प्रशासन अगाडि भेटिन्छन् त कति वीरगन्ज घन्टाघर वरिपरि। युवाले काठमाडौंको माइतीघरमा गरेको प्रदर्शनको तरङ्ग दाङ सहिदगेट वरपरसम्म देख्न सकिन्छ। पदमा आसिन जिम्मेवार मानिसको गैरजिम्मेवार टिप्पणीले गर्दा हिजोआज बलात्कारसँग सम्बन्धित विषयमा उमेरका आधारमा रियल युवा पुस्ता निक्कै आक्रोशित र उत्तेजित अवस्थामा प्रदर्शन गर्दैछन्। सामाजिक संजालमा पनि सोहीअनुरूपका पोस्ट र ह्यास ट्याग देख्न सकिन्छ। तर, बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग के अहिले सडक आन्दोलन गर्दै गरेका युवाको स्वामित्वमा मात्रै छ? राजनीतिक लाभलाई हिसाबकिताब गर्दै केही माननीयले यो विषय सार्वजनिक उपभोगका लागि अभिव्यक्ति दिइरहेको पनि अनुभूति गर्न सकिन्छ।
मृत्युसँग मान्छे डराउने परिकल्पना गर्दै बलात्कारीलाई फाँसी हुनुपर्ने माग गरिएको हुनसक्छ। बलात्कारीलाई फाँसी हुँदा जघन्य अपराध संख्यामा कमी आउँदै जाने अपेक्षाले पनि सो कुरा उठेको हुनुपर्छ। बलात्कार सामन्तवादी पितृसत्तात्मक र पुरूषवादी सोच र व्यवहारसँग जोडिएको छ। फाँसीले करणी रोक्ने तर्क तथ्यमा आधारित छैन। चेतनाको स्तरले बरु रोकथाम गर्ला। एकजना पीडकलाई फाँसी दिँदै गर्दा ऊसँग सम्बन्धित परिवार र साथीभाइमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला? समाजमा हिंसा बढ्ने खतरालाई पनि हेक्का रोक्नुपर्छ। संसारभरको अभ्यास हेर्दा कानुनी सेवाको पहुँचसम्म पुग्न नसक्ने आर्थिक, सामाजिक हिसाबले पछि परेको समुदाय नै मारमा परेको देखिन्छ। मृत्युदण्ड हुने व्यवस्था सुरु हुँदा दोषी उम्किएर एकजना निर्दोषले यदि ज्यान गुमाउनुपर्‍यो भने त्यसको परिणति के हुन्छ?
सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा सन् २०१९ सम्म १ सय ६ देशले सबै किसिमको अपराधमा पूर्णरूपमा मृत्युदण्डको व्यवस्था अन्त्य गरिसकेका छन्। लगभग ५५ देशले अझ पनि मृत्युदण्डको प्रावधान कायमै राखेका छन् भने ६ देशले सामान्य अपराधमा र लगभग ३० देशले अभ्यासमा मृत्युदण्डको व्यवस्था नगरेको अवस्था छ।
नेपालको सन्दर्भमा २००७ सालको परिवर्तन आगाडि मृत्युदण्ड दिने चलन थियो। त्यसबेलाबाट सामान्य अपराधमा माफी दिने चलन सुरु भयो तर मृत्युदण्ड दिने क्रम रोकिएको चाहिँ थिएन। २०४६ र २०४७ को राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तनपछि नेपालले मृत्युदण्डको प्रावधानलाई पूर्णरूपमा हटाएको छ। तर, नेपालमा पुनः रिभर्स गियरमा जानुपर्ने आवाज अहिले जोडतोडले उठिरहेको सुनिन्छ।
अहिले चीन, इरान, साउदी अरब, इराक र इजिप्ट सबैभन्दा धेरै मृत्युदण्ड दर भएको देशको सूचीमा अग्रपंक्तिमा पर्ने गर्छन्। दक्षिण एसियामा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र मालदिभ्समा अझै पनि यो व्यवस्था कायम नै छ। मृत्युदण्डको व्यवस्था भएको देशमा के अपराध कम हुँदै गएको छ त? पक्कै छैन।
कुनै पनि किसिमको अपराधमा मृत्युदण्ड दिनु हुँदैन भन्ने मानवअधिकारको मान्यता हो। यद्यपि, आजको उन्नत र आधुनिक सामाजिक परिवेशमा पनि आफूलाई मानवअधिकार र विधिको शासनको उद्गम भएको दाबी गर्ने मुलुकले समेत अझै मृत्युदण्डको व्यवस्था कायम राखिराखेका छन्।
मृत्युदण्ड दिँदा मानवअधिकार उल्लंघन हुन जान्छ। सन् १९४८ मा जारी गरिएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भनेर उल्लेख छ। सोही घोषणापत्रको धारा ५ मा यातना वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिने छैन भनिएको छ। मृत्युदण्डजस्तो अमानवीय कार्य गर्न नहुने कुरा यी दुवै धारालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) (२), २० (१ ), (२), २२ (१), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ६ (१) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल १९८९, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलगायत नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा अभिसन्धि, मानवअधिकार र न्यायका सिद्धान्तविपरीत संविधानद्वारा नै संरक्षित नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार प्रतिकूलको बहस हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण छ।
मृत्युदण्ड दिँदा अपराध घटेको तथ्य कतै पनि भेट्न सकिँदैन। बरु निर्दोषको भुलवस ज्यान गयो भने कुनै पनि मूल्य तिरेर उसको अमूल्य जीवन फिर्ता हुन सक्दैन। हाम्रो जस्तो शक्ति रवाफ र पहुँचका आधारमा न्याय किनबेच हुने वातावरणमा शक्तिमा हुनेहरूले पूर्वाग्रह साँध्ने र निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने सम्भावना चाहिँ प्रवल रहन्छ। सायद, यही कारण एम्नेस्टी इन्टरनेसनलजस्ता मानवअधिकारवादी संस्थाले जुनसुकै परिस्थितिमा र जस्तोसुकै प्रकृतिका अपराधमा समेत मृत्युदण्ड हुनु हुँदैन भन्ने वकालत गर्दै आएको छन्।
नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी अपराधसंहिता र मुलुकी देवानीसंहितामा करणी गरी ज्यान मारेकालाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ। कानुनले करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी सजाय पनि तोकेको छ। यद्यपि, पीडितको उमेरअनुसार अपराधका नापजाँच गर्नु आफैंमा त्यति न्यायसङ्गत कुरो भने होइन।
नेपालमा अहिले भएको प्रमुख समस्या कानुन कार्यान्वयन नहुँदाको हो। सरकारले पीडकलाई खुला पन्छीजस्तै छोडिदिँदाको हो। सीमित अधिकार उपभोग गर्न मिल्ने अपराधीले निर्धक्क घटना घटाउँदै हिँडिरहेकाले गर्दा हो। पीडितको क्रन्दनलाई राज्यले सुन्नुपर्छ र न्याय निसृत हुने सुनिश्चित गर्नुपर्दछ, तर कसैले पनि बुझेर वा नबुझेर मृत्युदण्डको व्यवस्था व्युँताउन माग गर्दै सडकसम्म आउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। बलात्कारीलाई फाँसी दिएर अपराध कम हुँदैन। सामाजिक संरचना अवचेतन मनोविज्ञानमा लुकेर रहेको हिंसात्मक सोच सबैले त्याग्न सक्यो भने बलात्कारलगायत सबैखाले अपराधिक घटनामा न्यूनीकरण हुनेछ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २२, २०७७
बिपिन बुढाथाेकी उपमहासचिव, एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल
अर्जेन्टिनाका चर्चित फुटबल खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको निधन भएको छ। उनको हृदयघातका कारण बुधबार अर्जेन्टिनामा निधन भएको हो। आयोमेल संवाददाता
भारतीय चिनी रोकिँदा नेपालीले बजार पायो
‘भारतीय चिनी नेपालीभन्दा कम मूल्यमा आयात हुने र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बिक्री नहुने समस्या थियो,’ कञ्चनपुरको भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक शंकर बोगटीले भने, ‘तर, यो वर्ष भारतबाट आयात नभएपछि हाम्रो चिनीले राम्रो बजार पाएको छ।’ उनका अनुसार विगतमा भारतबाट चिनी आयात हुँदा नेपाली उत्पादन खपत गर्न समस्या थियो। माेहन जाेशी
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पुन: स्थगित
सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन पुनः स्थगित गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यही मङ्सिर २७ गते हुने भनिएको निर्वाचन दोस्रो पटक स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोमेल संवाददाता